Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC hiasa amin'ny famoronana | Famoronana an-tserasera
Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC
Encarni Arcoya | | Fitaovana famolavolana
Nolazaina hatrany fa sarin'arivony dia sarina arivo ny sary. Na izany aza, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola zava-dehibe kokoa io, satria ankehitriny dia ny litera no ampiasaintsika kely indrindra, ary ny sary dia mitari-dalana antsika kokoa noho ny an'ny lahatsoratra. Noho io antony io, ny fananana sary tsara sy ny mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC dia, tsy isalasalana, ny fitaovana ilaintsika hahazoana ny tsara indrindra avy amin'io sary io.
fa, Misy mpanonta sary maimaimpoana tsara ve? Sa ny karama no tsara indrindra? Androany dia te hiresaka aminao momba ny safidy tsy maintsy ahitanao ny mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC. Araka izany, izay sary nataonao dia azo ovaina mba hahatratrarana ny vokatra tadiavinao.
1 Fandaharana izay maniry ny ho mpamoaka sary maimaimpoana indrindra ho an'ny PC
1.1 Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC: GIMP
1.4 Sary Pos Pro
1.6 Fandaharana hafa azo raisina ho toy ny tonian-dahatsoratry ny sary maimaimpoana ho an'ny PC
Fandaharana izay maniry ny ho mpamoaka sary maimaimpoana indrindra ho an'ny PC
Ny iray amin'ireo lesoka azonao atao rehefa maka sary na mahazo sary dia ny tsy fanovana azy. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe mila fonony amin'ny boky ianao. Mandeha amin'ny banky sary ianao ary mahita iray izay tianao, dia alainao izany, na vidinao ary dia izay, tsy manao zavatra hafa ianao fa mametraka ny lohatenin'ilay boky fotsiny dia esory.
Na izany aza, fantatrao ve fa lesoka lehibe io? Eny eny, satria io sary novidinao na nosintominao io dia mety hanana kalitao tsara kokoa ary hisy vokany mahomby kokoa raha toa ka handalo mpamoaka sary aloha. Ny fanatsarana ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny fametrahana sosona mafana kokoa na ny fanazavana ny antsipirian'ny sary aza dia afaka manova azy tanteraka ary, manomboka amin'ny tsy fanamarihana ka hatrany amin'ny fisintomana ny sain'izay mahita azy dia misy fahasamihafana lehibe.
Na izany aza, Fantatray fa nieritreritra foana ianao fa ny mpamoaka sary tsara indrindra ho an'ny PC dia tsy ilay nomeny anao maimaimpoana, fa mila mandoa ianao. Ny olana dia diso ianao. Androany dia misy programa marobe azo raisina ho mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC. Raha atao teny hafa, tsy izay rehetra manome kalitao akory no mila vidiana; indraindray dia ampy ny mikaroka tsara ireo safidy azonao eny an-tsena.
Ary miresaka momba ireo safidy ireo, ireto programa azonao raisina ireto dia ireto manaraka ireto:
Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC: GIMP
GIMP dia heverina ho mpamoaka sary maimaimpoana indrindra ho an'ny PC, saingy programa iray mety hiteraka fanehoan-kevitra roa ianao: amin'ny lafiny iray, tsy fahafaliana, satria be pitsiny izany, raha tsy mandany fotoana ianao dia mety handresy anao satria sarotra ny mitantana., indrindra amin'ny voalohany; amin'ny lafiny iray hafa, fifaliana, satria manana fitaovana maimaim-poana afaka miatrika fandaharana karama malaza ianao, toy ny Photoshop.
Ary izany tokoa GIMP dia heverina ho mpamoaka sary maimaimpoana tsara indrindra ankehitriny, saingy tsy mora ny fampiasana azy. Satria manana fitaovana, fampiasa ary fomba fampisehoana ny zava-drehetra izy, dia tsy mora ampiasaina izany, ary maharitra ora sy torolalana ianao vao hahafehy tsara azy io.
Mazava ho azy, ny manam-pahaizana manokana dia milaza fa tsara na tsara kokoa noho ny Photoshop. Raha ny marina dia mitovy amin'ity programa ity izy io, saingy nampiantranoina tamin'ny faritra samihafa izay midika fa tsy maintsy manandrana mandalina ianao mba hahazoana tombony betsaka amin'izany.
Ny sasany dia mihevitra fa ho an'ny mpampiasa mandroso ihany io, saingy tsia. Ny fitaovana fototra indrindra dia mianatra mora foana ary azo ampiasaina amin'ny mpampiasa ambaratonga fototra sy salantsalany, saingy tsy hampiasain'izy ireo amin'ny 100% amin'izay azony atolotra.
Mikasika ireo drawbacks dia manana iray izy, ary izany dia tsy misy kinova finday amin'ilay programa, ho an'ny PC ihany.
Tadidinao ve ny Windows Paint? Izany dia zavatra iray mitovy amin'ilay programa azonao ampiasaina amin'ny fahazazanao. Manaraka an'io filozofia io ihany izy ary lasa mpamoaka sary maimaimpoana betsaka indrindra ho an'ny PC.
Izy io dia mifantoka indrindra amin'ireo mpampiasa amin'ny ambaratonga fototra, nanomboka manome ny fitaovana ilaina amin'ny fanovana sary "fototra". Saingy tsy midika izany hoe sarotra ny manao na inona na inona. Izy io dia afaka manitsy sosona, gradients, famirapiratana, mifanohitra sns. Raha ny marina, ny sasany amin'ireo fitaovana ao aminy dia "fitsiriritana" amin'ny programa hafa, toy ny fihodinana / zoom 3D izay mamerina ny sary.
Darktable dia iray amin'ireo safidy heverina ho mpanonta sary maimaimpoana indrindra ho an'ny PC. Ary satria afaka mifaninana amin'ny fandaharana roa be karama malaza: Photoshop sy Lightroom. Ary eny, averinay ihany koa fa maimaim-poana izany.
Mamela ny fiaraha-miasa amin'ireo rakitra RAW, ary koa ireo lehibe (JPG, GIF…) ary misy toe-javatra maro hiaraha-miasa. Raha ny marina dia very hevitra ireo manandrana azy fa tsy misy vidiny ny fitaovana iray, ary tsy misy famandrihana hampiasa zavatra hafa.
Sary Pos Pro
Ity mpamoaka sary ity dia miompana indrindra amin'ireo vao manomboka, fa raha ny tena izy dia misy olona afaka mampiasa azy io noho ny fitaovana fanodinana aorian'ny tolotra (avy eo ny anarany).
Manana izany karazana interface roa, manomboka amin'ny tsotra ka hatramin'ny mandroso, izay ahitanao fitaovana mandroso toy ny fanitsiana sosona, sarontava, gradien, firafitra ary eny, mamela anao hanova RAW sy hiara-hiasa amin'izy ireo koa izany.
Raha zavatra tsotra kokoa no tianao, dia ny interface mpiorina no be mpanondro indrindra, satria hanana fitaovana mety hanaovana izay tianao amin'ny ambaratonga fototra izy.
Amin'ity tranga ity ny olana fotsiny dia manana fitaovana bebe kokoa izy amin'ny alàlan'ny Photos Pos Pro Premium, fa misy vidiny ireto. Azonao atao ny manandrana azy vetivety ary manapa-kevitra raha hanohy amin'ny kinova maimaim-poana na hiova.
Rivaling Photoshop, mety ho iray amin'ireo mpanonta sary tsara indrindra izy io, tsy hoe satria hanana ianao saika mitovy fitaovana amin'ilay programa fandoavam-bola teo aloha, fa koa satria handany toerana kely eo amin'ny kapila mafy ataonao izy io ary tsy handany loharano betsaka toy ny hafa.
Afaka manana izany amin'ny Windows, MAC ianao, fa amin'ny finday ihany koa, na Android na iOS.
Raha ny momba ny endriny, dia feno ihany io na dia ny "endrika minimalista" aza dia mety "hamitaka anao amin'ny voalohany." Izy io dia manana sary mihetsika izay manampy anao hahatakatra ny programa ary koa ny fampianarana hahafantarana izay tokony hataonao amin'ny fotoana rehetra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ho azo avy amin'ny sary.
Fandaharana hafa azo raisina ho toy ny tonian-dahatsoratry ny sary maimaimpoana ho an'ny PC
Raha tsy maharesy lahatra anao ireo programa ireo dia tokony ho fantatrao fa misy safidy hafa azonao raisina, toy ny:
Pixlr (amin'ny kinova E sy X).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny PC
Sora italiana: endri-tsoratra izay atolotray